सिभिल बैंक सीईओ किशोर महर्जनको जीवन : ३३ वर्षे ‘बैंकिङ करिअर’ मा करोडपतिलाई अर्बपति बनाएँ - Ratopati
‘३३ वर्षे बैंकिङ करिअरमा कैयौं मानिसलाई लखपतिबाट करोडपति बनाएको छु,’ सिभिल बैंक कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) किशोर महर्जनले सुनाए, ‘करोडपतिलाई अर्बपति बनाएँ । अब आफैंले व्यापार थाल्ने कि भन्ने सोचेको छु ।’
सिभिल बैंक स्थापनाकालदेखि सीईओ महर्जनको दोस्रो कार्यकाल आगामी साउन १२ बाट सकिँदै छ । त्यसपछि के गर्ने भन्नेबारे उनी सोच्दै छन् । हिमालयन बैंक, सनराइज बैंकमा समेत सीईओको भूमिका निर्वाह गरिसकेका सिभिल बैंक सीईओ किशोर महर्जनसँग रातोपाटीको मेरो जीवनका लागि दीपेन्द्र राईले गरेको कुराकानी :
मौसम, ठाउँ र ‘मुड’ अनुसार खान रुचाउँछु । तर पनि मन पर्ने खाना त नेपाली नै हो । नेपाली खानाबाहेक ‘चाइनिज’ र ‘कन्टिनेन्टल’ मन पर्छ । ‘लन्च’ या ‘डिनर’ का लागि दैनिकजसो रेष्टुरेन्ट पुगेकै हुन्छु । हल्का ‘फ्राइ’ गरेको चीज, आलुका परिकार र ‘बोइल’ गरेको ‘मसरुम’ मन पर्छ । पकाउने रुचि थियो÷छ तर समयाभावले भान्छामा नपसेको धेरै भयो । मौका मिलिहाल्यो भने पकाउँछु तर त्यस्तो मौका तीन/चार महिनामा पनि आउँदैन ।
कार्यालयीय प्रजोयजनका लागि टाइसुट नै लगाउने गर्छु । म हिमालयन बैंकमा हुँदा प्रत्येक आइतवार दौरासुरुवाल लगाउँथे र स्टाफलाई पनि लगाउन अनुरोध गरेको थिएँ । शुक्रवारचाहिँ क्याजुअल लगाउँछु । सनराइजमा मात्रै होइन सिभिल बैंकमा समेत आइतवार दौरासुरुवाल र शुक्रवार क्याजुअल पोसाक लगाउने चलन छ ।
पोसाकमा वार्षिक खर्च कहिलेकाहीं बढी हुन्छ भने कहिले कम । कुनै वर्ष एक लाख रुपैयाँ पनि खर्च हुँदैन भने कहिलेकाहीं जुत्ता, बेल्ट, टाइको खर्च सबै जोड्दा ५/६ लाख नाघ्छ । विशेषतः ‘डार्क’, ‘ब्ल्याक’ र ‘ग्रीन कलर’ को पोसाक लगाउँछु । त्यसबाहेक हल्का ‘रेड’ र हल्का ‘ओरेन्ज कलर’ का पोसाक मन पर्छ ।
सुट धेरैजसो सिलाउने गरेको छु । यात्राका लागि विदेश जाँदा ‘ब्रान्डेड’ सुट किन्ने गर्छु । सर्ट, टी/सर्ट ‘रेडिमेड’ नै लगाउँछु । सुट सिलाउँदा एलिगेन्स वेयर अन्नपूर्ण अर्किड पुग्छु । ‘ब्रान्ड’ प्रति सचेत छु । घडी रोलेक्स, ओमेगालगायतको मन पर्छ भने पोसाकको हकमा बोस, क्रोक्रोडायलको टी/सर्ट र बोस, रेमिजको टाइ लगाउँदै आएको छु । ‘स्पोर्ट्स वेयर’ मा एडिदाज, नाइकलगायतले सबैको मन जितेको छ ।
३२/३३ वर्षदेखि नियमित स्क्वस खेल्दै आएको छु । म नेपाल स्क्वस एसोसिएसन अध्यक्ष पनि हुँ । हिजोआज पनि सातामा चार दिनजसो स्क्वस खेल्छु । लामो समय खेल्डा घुँडामा समस्या हुन्छ ।
‘डाइटिङ’ नगरे पनि खानेकुरामा सचेत छु/रहन्छु । स्क्वस खेल्ने भएकाले जे खाँदा पनि पच्छ । तर, त्यसो गर्दिनँ । योगाको दुई/चारवटा ‘क्लास’ लिएको छु । श्रीमतीले नियमित गर्ने भएकाले उनले भनेकोअनुसार आफ्नै तरिकाले योगाबारे जानकारी लिन्छु ।
समय पाउनसाथ स्क्वस खेल्ने भएकाले ‘मर्निङवाक’ जाने समय हुँदैन । झन्डै डेढ घन्टा स्क्वस खेल्छु ।
हिजोआज पत्रपत्रिकाबाहेक केही पढेको छैन । जीवनलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउने किताब पढ्न असाध्यै मन पर्छ । त्यसबाहेक उपन्यास, ‘वेल नन पर्सन’ को ‘बायोग्राफी’ किताब रुचिपूर्वक पढ्छु ।
रवीन्द्रनाथ टेगोर, लियो टोल्सटोय, बालकृष्ण सम र कर्ण शाक्यले लेखेका किताब पढेको छु । बैंकसँग सम्बन्धित लेख लेख्ने गर्छु । बैंकिङबाहेक मसँग झन्डै एक हजार किताब छन् । पछिल्लो समय किताब त्यति किन्न छाडे पनि वार्षिक रूपमा १०/१५ हजार खर्चिन्छु भने म्यागेजिनमा २०/२५ हजारले भ्याउँदैन ।
घुमफिरमा रुचि छ । पहिले/पहिले त धेरै घुम्थें । हिजोआज पनि सालिन्दा १०÷१२ दिन घुम्न निस्कन्छु । लगभग ४६ जिल्ला घुमेको छु । विदेशका हकमा ४० देश घुमिसकेको छु ।
घुमेकामध्ये बेलायत र पोखरा असाध्यै मन पर्यो । एकपटक राराताल पुग्न पाए हुन्थ्यो लागेको छ । ब्राजिल र ग्रीस पुग्ने त्यत्तिकै रहर छ ।
अहिले ‘ट्रान्जिसनल फेज’ मा छु । सिभिल बैंकसँगको दोस्रोपटकको ‘टेन्डर’ आगामी साउन १२ मा सकिँदै छ । मेरो उत्तरदायित्व हस्तान्तरण गरिसकेकाले हिजोआज कामको भार छैन । फुर्सदमै छु । ५८ वर्ष पुगे पनि अझै १०/१२ वर्ष मज्जाले काम गर्न सक्छु भन्ने हिम्मत छ ।
त्यसैले विभिन्न ‘अप्सन एक्प्लोर’ गर्दै छु । ३३ वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा बिताएँ । त्यसैले ‘नन बैंकिङ सेक्टर’ मा जाने हो कि सोच्दै छु । तीन/चार इन्टरप्राइजेजबाट ‘अफर’ आएका छन् । कन्सल्टेन्सी फर्मबाट पनि जोइन्ट गर्न अनुरोध भएको छ । म आफैंले कन्सल्टेन्सी खोल्ने हो कि भन्ने पनि लागेको छ । त्यतिमात्रै होइन, आफैंले व्यापार किन नथाल्ने सोचिरहेको छु । ३३ वर्षमा कैयौं मानिसलाई लखपतिबाट करोडपति बनाएको छु । करोडपतिलाई अर्बपति बनाएको छु । तसर्थ, अबै आफैंले व्यापार थाल्ने कि भन्ने ‘अप्सन’ पनि छँदै छ ।
बिदाका दिनबाहेक घरपरिवारलाई समय दिन सकेको छैन । परिवारसहित गएर रेष्टुरेन्टमा खाने गरे पनि चलचित्र हेर्नचाहिँ गएको छैन । किनकि चलचित्र कमै हेर्ने गर्छु । कुनै÷कुनै वर्ष त एउटा पनि चलचित्र हेरेको हुन्न ।
मलाई स्क्वस नै मन पर्छ । त्योबाहेक फुटबल । फुटबल हिजोआज पनि खेल्ने गर्छु । बक्सिङ पनि खेल्थें । विदेशीमा लिभपुरल र नेपालका थ्री स्टार क्लब मन पर्छ ।
आइफोन सिक्स र सामसुङ गरी दुई मोबाइल सेट बोक्दै आएको छु । आइफोनको ९० हजार र सामसुङको ८५ हजार परेको हो । मोबालइमा भएका एप्लिकेसन सबै प्रयोग गर्दै आएको छु ।
टेलिभिजनमा ६० प्रतिशत समाचार हेर्छु । ३० प्रतिशत ‘मुभी एन्ड वाइल्ड लाइफ’ हेर्ने गरेको छु । ‘वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम’ औधी मन पर्छ । घरमा ५५ इन्चको सामसुङ टेलिभिजन छ । प्रायः राति १२ बजे सुत्ने भएकाले घर पुगेपछि टीभी हेर्छु ।
पछिल्लो समय ललितपुरको लबिम मलमा चलचित्र ‘सरकार’ हेरेको थिएँ । मलाई चलचित्र हेर्ने ‘प्यासन’ छैन । हेरेकामध्ये ‘गडफादर’ र रक्कीका सिरिज मन पर्यो ।
म स्वस्थ छु । अहिलेसम्म ६/७ पटक ‘होलबडी चेकअप’ गराएको छु । रक्तचापको औषधि सेवन गर्दै आएको छु । स्वस्थ रहनुको रहस्य भनेको शारीरिक अभ्यास हो । कामको चाप रहे पनि तनाव लिन्न । यिनै कारणले स्वस्थ रहन मद्दत गरेको हो ।
म जुन पेसामा छु, भाषण त गर्नैपर्छ । भाषण गर्दा कहाँनजिक रोक्ने, कहाँ जोड दिने भन्ने मलाई त्यति ज्ञान छैन । मेरो भाषण उपदेशात्मक हुने भएकाले कतिपय अवस्थामा पाच्य नहुन सक्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा आक्रामक भाषण गर्नै पर्दैन । जति गर्नुपर्छ बौद्धिक नै हुन्छ । प्राविधिक विषयमा बोल्नुपर्यो भने तयारी गर्ने गर्छु ।
मापसे कसले गर्दैन ? कसैले लुकेर गर्लान्, कतिपयले खुलमखुला । म पनि गर्छु । तर, मादक पदार्थले पिउने मानिसलाई खानु भएन । म बियरप्रेमी हुँ । बियरले स्वास्थ्यलाई त्यति फाइदा नगर्ने भएकाले ह्वीस्की पिउँछु । ब्ल्याकलेबल पनि कहिलेकाहीं पिउँछु । घरमा होमबार नै नभए पनि सामान्य ‘कलेक्सन’ छ । सामान्यतः दुई पेगसम्म पिउने गर्छु ।
गीत/संगीत सुन्दै आएको छु । नारायणगोपाल, दीप श्रेष्ठ, ओमविक्रम विष्ट, अरूणा लामा, सुक्मित गुरुङको गीत सुन्ने गर्छु । बिटल्स पनि सुन्छु । कहिलेकाहीं गुनगुनाउने गर्छु । म आफैं गितार पनि बजाउँछु ।
पश्चाताप लाग्नेगरी भूल गरेको छैन । मैले खोजेको ‘रिजल्ट’ नपाउँदा तत्काल सुधार गर्न नसक्दा त्यसको नकारात्मक नतिजा आएको हो कि जस्तो लाग्छ ।
म जहाँ बस्दै आएको छु, यो घर ऋण लिएर बनाएको १० वर्ष भइसक्यो । ऋण तिरिसकेको छैन । ‘वेस्टर्न डिजाइन’ को घर वास्तुशास्त्रअनुसार ठीकठाक छ । घर बनाउँदा दुई करोड ८० लाख लागेको थियो ।
मेरो राशी कुम्भ हो । मेरो ग्रहदशा श्रीमतीले हेराउँछिन् । श्रीमतीले नै कहिलेकाहीं पूजासमेत लगाउँछिन् । हातमा लगाएकोमध्ये पुष्पराज र रुबी हो । यो लगाउँदा ‘पोजेटिभ इम्प्याक’ ल्याउँछ भनिन्छ । म आफंै ‘पोजेटिभ इम्प्याक’ भएकाले व्यवहारमा त्यस्तो अनुभूति गरेको छैन । तर, ग्रह र नक्षत्रको फलप्रति धेर÷थोर विश्वास लाग्न थालेको छ ।
कपालमा तेल लगाउँछु । फेसियल गर्ने बानी छैन । ‘विन्टर’ मा सामान्य क्रिम लगाउने गर्छु । अनुहारमा आफ्टर सेभबाहेक केही लगाउँदिनँ । क्लबमा सदस्य भए पनि मैले साउना बाथ, स्टीम, बडी मसाज कहिल्यै गर्दिनँ ।
परिवारमा श्रीमान् श्रीमती, एक छोरा र दुई छोरी छौं । छोरा अभिषेक महर्जन अमेरिकामा बस्छन् । उनी बैंकर हुन् । दुई छोरी अभिलाषा महर्जन र कान्छी छोरी बेलायत बस्छन् । ठूली छोरी बैंककी मेनेजर र अर्की छोरी बेलायतकै अडिट फममा कार्यरत छिन् । श्रीमती सृजना महर्जनको आफ्नै व्यवसाय छ ।
विदेश धेरै घुमियो । बसियो । हेरियो । नेपालका संस्कृति, प्राकृतिक सम्पदा र ‘मोडर्न सिभिलाइजेसन’ को हाइब्रिड सोसाइटी बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । त्यसो गर्दा ‘ट्रेडिसन भ्यालुज लुज’ नगर्ने र ‘एमिनिटी’ र ‘फेसिलिटिज’ मा सजिलोपना ल्याउँदै लाई ‘हाइब्रिड मोडल’ को नेपाल बनाउन पाए नेपालीको भलो हुने थियो कि ?
मृत्यु अकाट्य छ । मृत्युसँग डर लाग्दैन । गोरखा भूकम्पमा चाहिँ मरिने हो कि जस्तो लागेको थियो । मृत्यु यस्तै होस् भन्ने सोचेकै छैन । मरेपछि डुमै राजा ।